Strong NdFeB futhi SmCo odonsa zingakhiqiza amandla ukushayela ezinye izinto ngaphandle kokuxhumana ngqo, izicelo eziningi kangaka ukusizakala lesi sici, ngokuvamile efana couplings kazibuthe bese amaphampu ahambisana kazibuthe for izicelo seal-ngaphansi. Ama-coupling we-Magnetic drive anikezela nge-torque engeyona yokuxhumana. Ukusetshenziswa kwalokhu kuhlangana kukazibuthe kuzosusa ukuvuza koketshezi noma kwegesi kusuka kuzinto zohlelo. Ngaphezu kwalokho, ukuhlangana kukazibuthe nakho akukhululekile, ngakho-ke kunciphisa izindleko.
Abiwa kanjani odonsa kumaphampu kazibuthe ahlangana nomsebenzi?
Okuhlanganisiwe NdFeB noma SmCoodonsa banamathele emasongweni amabili okugxila ngapha nangapha kwegobolondo lokuqukethwe ezindlini zepompo. Iringi yangaphandle inamathiselwe ku-shaft yemoto; iringi yangaphakathi kushaft yepompo. Indandatho ngayinye iqukethe inani elifanayo lamazibuthe afanayo nawaphikisayo, ahlelwe ngezigxobo ezishintshanayo ezizungeze iringi ngayinye. Ngokushayela uhhafu wokuhlangana wangaphandle, i-torque idluliselwa ngozibuthe engxenyeni yokuhlangana kwangaphakathi. Lokhu kungenziwa emoyeni noma ngesivimbelo esingahlanganisi sikazibuthe, esivumela ukuhlukaniswa okuphelele komazibuthe bangaphakathi kozibuthe bangaphandle. Azikho izingxenye zokuxhumana kumaphampu we-magnetic drive avumela ukudluliswa kwe-torque ngazo zombili i-angular kanye ne-parallel misalignment.
Kungani NdFeB noma SmCo ezingavamile emhlabeni odonsa ezikhethiwe kazibuthe futha couplings?
Izinto zikazibuthe ezisetshenziselwa ukuhlangana kukazibuthe zivame ukuthi ngozibuthe beNeodymium neSamarium Cobalt ngezizathu ezilandelayo:
1. NdFeB noma SmCo uzibuthe uhlobo odonsa unomphela, okuyinto kulula kakhulu ukusebenzisa kuka electro odonsa odinga ugesi wangaphandle.
2. Ozibuthe bakaNdFeB nabakwaSmCo bangafinyelela amandla amakhulu kakhulu kunemagnethi yendabuko ehlala njalo. Uzibuthe oshintshiwe weNeodymium unikeza umkhiqizo wamandla ophakeme kunayo yonke into yanamuhla. Amandla kagesi aphezulu enza isisindo esikhanyayo sezinto ezingaphansi kukazibuthe ukufinyelela ekusebenzeni okuthuthukile kohlelo lonke lwepompo ngosayizi ohlangene.
3. Umhlaba ongavamile we-Cobalt magnet ne-Neo magnet bangasebenza ngokuzinza okungcono kokushisa. Enkambeni yokusebenza, njengoba ukushisa kokusebenza kukhula noma ukufudumeza okwenziwe yi-eddy yamanje, amandla kazibuthe bese i-torque izoncipha kancane ngenxa yama-coefficients wokushisa angcono nokushisa okuphezulu kokusebenza kwamagnet we-NdFeB ne-SmCo. Ukushisa okukhethekile okukhethekile noma uketshezi olonakalisayo, uzibuthe weSmCo uyisinqumo esingcono kakhulu sezinto zikazibuthe.
Yini ukuma NdFeB noma SmCo odonsa esetshenziswa kazibuthe futha couplings?
I odonsa SmCo noma NdFeB sintered kungenziwa kukhiqizwa ezahlukene ukuma nosayizi. Ukusetshenziswa kokuhlangana kwepompo kazibuthe, ubukhulu bobukhulu bukazibuthevimba, isinkwa noma ingxenye ye-arc.
Umkhiqizi oyinhloko wokuhlanganiswa okunamandla kazibuthe noma amaphampu ahlanganiswe kazibuthe emhlabeni:
I-KSB, DST (Dauermagnet-SystemTechnik), SUNDYNE, IWAKI, HERMETIC-Pumpen, MAGNATEX
Isikhathi Iposi: Jul-13-2021